प्रचण्डबाटै घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली ! - Dainik Nepal
प्रचण्डबाटै घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली !
दैनिक नेपाल २०७६ असार २६ गते १५:२०
काठमाडौं, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका सहयात्री तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाटै घेराबन्दीमा परेको विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
सो क्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरी प्रचण्डनिवास खुमलटारमा भारतका विदेश मामला जानकार लिएर पुगेको पनि बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा मन्त्री यादवसँग प्रधानमन्त्री ओलीले विवादमा आउने निर्णय किन गरेको भनी सोधेपछि यादवले आफू दबाबमा आएको जवाफ दिएर बीचैमा निस्किएका थिए ।
सो बैठकमा तरकारी प्रकरणका सम्बन्धित कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवलगायत भने उपस्थित थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सो विषयमा पनि सोधेका थिए ।